Ndị Na-Agba Ịnyịnya Ígwè | October 2021
Isi > Ndị Na-Agba Ịnyịnya Ígwè
Onye na-agba anụ anaghị eri anụ - esi edozi
Pro nwere ndị na-agba ịnyịnya ígwè pro ọ bụla? Riserị ndị ọzọ na-agba ịnyịnya ígwè ndị ọzọ gụnyere Adam Hansen (Lotto Soudal), Christine Vardaros (Stevens Pro Cycling), Catherine Johnson (Elite CX champion) na Paralympian David Smith MBE.
ụdị ndị na-agba ịnyịnya ígwè
Ofdị ndị na-agba ịnyịnya ígwè - otu esi ekpebi
Kedu ụdị ndị na-agba ịnyịnya ígwè dị iche iche? Kedu ụdị ndị na-agba ịnyịnya ígwè dị iche iche? Climbers.Sprinters.Riders.Punchers.All-rounders. 28. 2018.
mmekọahụ nwoke na-agba agba
Mmekọahụ nke Cyclist - nkọwapụta zuru ezu
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè dị mma n’elu akwa? Gba ịnyịnya ígwè egosila na ọ bụ ezigbo ụzọ dị ala iji kwụsị nsogbu metụtara njikọta mmekọahụ, ọkachasị n'etiti ụmụ nwoke na-eru nso ma ọ bụ na etiti afọ. 'N'ezie, ọ bụ uru aerobic na mmụba nke ọbara na-egosi na ime ka ịgba ịnyịnya nwoke bụrụ ihe nkwalite mmekọahụ maka ọtụtụ nwoke.
cyclist ụkwụ vs runners ụkwụ
Ckwụ na-agba ụkwụ na ụkwụ ụkwụ - otu esi eme ihe
Kedu ihe dị mma maka ụkwụ gị na-agba ọsọ ma ọ bụ ịnya igwe? Iwuli akwara Cygba ígwè nwere ike inyere gị aka ịzụlite ahụ ike na ọkara gị. Rungba ọsọ agaghị eduga n'ọtụtụ, mana ọ nwere ike inyere gị aka ịzụlite akwara siri ike. Usgbagharị pedal mgbe ịnyịnya ígwè bụ ọzụzụ iguzogide nke na-ewulite mọzụlụ ụkwụ.
Cyclist greg - ihe ngwọta bara uru
Kedu ihe dị njọ na azụ Greg LeMond? Ọ tara ahụhụ mkpịkpụ mgbaji na azụ ya ga-anọ na nkwado maka ọnwa atọ. A na-atụ anya ka ọ gbakee kpamkpam na nke ahụ. Ọ ga-anọ n'ụlọ ọgwụ maka ụbọchị ọzọ ma ọ bụ abụọ mana ọzọ karịa nhụjuanya dị n'azụ ya, ọ nọ n'ọnọdụ dị mma, ka Kathy LeMond kwuru.
ụmụ nwanyị ndị na-agba ịnyịnya ígwè
Cycmụ nwanyị ndị na-agba ịnyịnya ígwè - azịza dị mfe maka ajụjụ
Nye bụ nwanyị kacha agba ịnyịnya ígwè?
kristin armstrong ịgba ígwè
Kristin armstrong cyclist - chọọ ihe ngwọta
Kristin Armstrong nwere mmekọrịta na Lance?
-esi ghọọ onye pro ịgba ígwè
Otu esi eme ka onye na-agba ogu - zaa ajuju
Afọ ole ka ọ ga - ewe iji bụrụ onye na - agba mgba? Ọ bụ ahụmịhe siri ike iji gafee mmemme a ma Miller kwetara, 'Ọ na-ewe ezigbo afọ asaa iji zụlite onye na-agba ịnyịnya n'ime onye na-agba ịnyịnya.'
ụgbọ ala na-agbafe ndị na-agba ịnyịnya ígwè
Car na-agbafe ndị na-agba ịnyịnya ígwè - ihe ngwọta maka
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-ebute ụzọ karịa ụgbọ ala? dokwuo anya na ndị na-agba ịnyịnya ígwè kachasị mkpa karịa ụgbọ ala ndị ọzọ mgbe ha na-aga n'ihu n'ihu na nkwụsị. nye ndụmọdụ banyere akụrụngwa ịgba ịnyịnya ígwè mgbe ị na-eso ụzọ eji ụzọ eme ihe ma na-enye ndị ji ụkwụ aga ụzọ. kwadoro ka ndị na-agba ịnyịnya na-enye ndị na-agagharị agafe na-eche ịgafe n'okporo ụzọ n'okporo ụzọ ma ọ bụ n'okporo ụzọ. 29. 2020.
na Martin Cyclist
Dan martin cyclist - ngwọta na-adịgide adịgide
Afọ ole bụ Dan Martin onye na-agba ịnyịnya ígwè? /
kasị ukwuu agba ígwè n'oge niile
Onye Kasị Ukwuu na-agba ọsọ n'oge niile - ihe ngwọta nke ihe omume
Kedu onye kacha agba ịnyịnya agba niile? Eddy Merckx
mkpuchi igwe ịgba ígwè
Inye ego Cyclist - choo azịza ya
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè chọrọ mkpuchi? Ebe ọ bụ na iwu akwadoghị ndị ịgba ịnyịnya ígwè ịzụta mkpuchi, enwere iwu dị. Ndị insurers a ma ama gụnyere Yellow Jersey, Cycle Guard na PedalSure. Agbanyeghị na imirikiti atumatu gụnyere mkpuchi nke atọ, ihe ka ọtụtụ na-elekwasị anya na ikpuchi ndị na-agba ịnyịnya ígwè, yana ihe onwunwe ha.
David millar cyclist - ịza ajụjụ ndị a
Ebee ka David Miller bi? Girona, Spain
ndị na-agba ịnyịnya ígwè asọmpi
Ndị ọgba mgba asọmpi - ịza ajụjụ ndị a jụrụ
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-asọ mpi nwere ahịa? Zụọ Slọ Ahịa Ọkara Ọkara | Mpi Cyclist.
agadi agba ígwè
Old cyclist - Ibọrọ ka okwu
Kedu onye kacha gbaa agba ịnyịnya ígwè? Robert Marchand
French ndị na-agba ịnyịnya ígwè
French ndị na-agba ịnyịnya ígwè - otu esi edozi ya
Nye bụ onye egwuregwu French a kacha mara amara? 1. Jacques Anquetil (1934 - 1987) Site na HPI nke 73.13, Jacques Anquetil bụ onye France ama ama nke ama ama.
onye na-agba ịnyịnya ígwè emoji
Emoji Cyclist - olee otu ị ga-esi kpebie
Enwere igwe kwụ otu ebe Emoji? Onye na-agba ịnyịnya ígwè Onye na-agba ịnyịnya ígwè maka ezumike, egwuregwu ma ọ bụ njem. Anabatara Onye na-anya Bicing ka ọ bụrụ akụkụ nke Unicode 6.0 na 2010 n'okpuru aha Bicyclist ma tinye ya na Emoji 1.0 na 2015.
Cyclist okuku - olee nweta
obi mgbawa obi
Obi mgbawa nke Cyclist - ihe eji eme ihe
Cycgba ígwè nwere ike ibute nkụchi obi? Ọrịa obi na akwara obi nwere ọrịa strok, ọbara mgbali elu na nkụchi obi. Linggba ígwè oge niile na-eme ka obi gị, ngụgụ na mgbasa ozi gị dịkwuo mma, na-ebelata ohere ị nwere ịrịa ọrịa obi. Gba ígwè na-ewusi akwara obi gị ike, belata izu ike izu ike ma belata ogo abụba ọbara.
pantani gbara igwe
Pantani cyclist - ihe ngwọta na
Gịnị mere Marco Pantani? Otu ihe nkiri nke a ga-agbasa n'Italytali n'abalị Tuesday ga-atụgharị uche n'ụdị ọnwụ onye ọgba tum tum a ma ama bụ Marco Pantani. Pantani, onye meriri na 1998 Tour de France, nwụrụ mgbe ọ dị afọ 34 mgbe achọtara ya mgbochi na ụlọ nkwari akụ ya na 2004.